Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Energy|Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah
Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah
Barnaamijka Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah (CEF) ayaa maalgeliya horumarinta, muujinta iyo dejinta tikniyoolajiyadda tamarta nadiifka ah. Waxaa la aasaasay 2013, Gov. Inslee wuxuu sii waday inuu ku guuleysto sanduuqa, iyo sharci-dejinta ayaa mar kale maal-galiyay miisaaniyadda maaliyadeed ee barnaamijyadan deeqaha ah. Phorumarinta rogram iyo hawlgalinta ayaa hada socota. Tilmaamaha iyo taariikhaha xilliyada codsashada ee barnaamij kasta waxaa lagu dhajiyaa sidii la heli karo.
Ganacsigu wuxuu qabtay Guddiga La-talinta Siyaasadda Tamarta iyo Cimilada (ECPAC).
Shaqada guddiga waxay diiradda saareysaa dib-u-eegista qaab-dhismeedka taariikhiga ah iyo natiijooyinka barnaamijyada CEF iyo soo-saarista talooyinka loogu talagalay hagaajinta barnaamijyada. Faahfaahin intaas ka badan ka ogow (ECPAC) halkan.
Warbixinnada Mashruuca Sanduuqa Tamarta Nadiif ah
Avista - Degmada Eco
Avista - Kaydinta Tamarta Pullman
CRTC - Xogta Mashruuca
CRTC - Beddelidda Fiber Kaarboon -duug ah
Caanaha Edaleen - DVO System Recovery System
Saamaynta Biyo -dhalinta - Biodigester -ka Miisaanka Bulshada
Microsoft - Shaybaadhka Tamarta Sare
PNNL - Launchpad Kaydinta Grid
Iskaashiga PNNL, UW iyo WSU - Campus Transactive - Dulmarka Mashruuca
Iskaashiga PNNL, UW iyo WSU - Campus Transactive - Warbixintii ugu dambaysay
Tamarta Codka Puget - Kaydinta Batariga Glacier
UW - Taageerada Xeerka Xoogga Isticmaalka PV Smart Inverters
UW - Hawlgalka HVAC ee Qaab-dhismeedka Wax-qabadka ee Tallaabooyin Badan leh
UW - Hawlgalka Bess Isticmaalka Platt-ka Wakiillada Badan ee Volttron
Barnaamijka Casriyeynta Grid
Maalgelinta tamarta korontada ee dadweynaha iyo kuwa gaarka ah ee u adeega macaamiisha Washington. Adeegyadu waxay la shuraakoobi karaan ururada kale ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo ganacsiyada si ay u codsadaan maalgelin.
Ka hubi bogga Shabakadda xaalad iyo cusboonaysiin.
Barnaamijka Korantada ee Nidaamka Gaadiidka (ETS)
Barnaamijkani wuxuu deeqo siiyaa dawladaha hoose ee Gobolka Washington iyo tafaariiqda adeegyada korontada si loogu buuxiyo kaabayaasha.
Hubi bogga ETS xaalad iyo cusboonaysiin.
Barnaamijka Cilmi baarista, Horumarinta iyo Banaanbaxa
Barnaamijkan ayaa ah in lagu bixiyo ciyaar loogu talo galay lacagaha federaalka iyo kuwa aan dawliga ahayn ee loogu talagalay cilmi baarista istaraatiijiga ah iyo mashaariicda horumarinta ee teknoolojiyada cusub iyo kuwa soo ifbaxaya.
Ka hubi bogga RD&D xaalad iyo cusbooneysiin.
Hal -abuurka Tamarta Nadiifka ah ee Reer Miyiga
Taageeridda mashaariic ballaadhan oo kor u qaada tamarta nadiifka ah oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn; digtersters caanaha, tamarta la cusboonaysiin karo, waxtarka tamarta iyo adkeysiga.
Ka hubi bogga Hal -abuurka Tamarta Nadiifka ah ee Miyiga si aad u ogaato xaaladda iyo cusboonaysiinta.
Deeqaha Deyn bixiyeyaasha aan macaash doonka ahayn
Dib-u-wareejinta deeqaha amaahda amaahdu waxay muujineysaa in maalgashi yar oo dowli ah uu kobcin karo maalgashiga gaarka loo leeyahay. Tani waxay dhaqaajineysaa dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo shaqooyinka dadka reer Washington waxayna ka caawineysaa gobolkayaga inuu umadda ku hoggaamiyo waxtarka tamarta.
Ka hubi bogga amaahda boggeeda xaalad iyo cusboonaysiin.
Barnaamijka Howlgalinta Cadceedda
Barnaamijka Qorista Cadceedu wuxuu taageeraa horumarinta mashaariicda gaarsiiya faa'iidooyinka deegaanka iyo dhaqaalaha bulshada Washington.
Ka hubi bogga Cadceedda xaalad iyo cusboonaysiin.
Tamarta Qoryaha ee Xarumaha Dadweynaha
Barnaamijkani wuxuu xooga saarayaa mashaariicda ku badalaysa ilaha tamarta fosil alaabada tamarta qoryaha (tusaale, pellets, chips, cordwood iyo noocyada kale ee qashinka maaraynta dhirta) si loo daboolo baahiyaha kuleylka iyo / ama korontada ee xarumaha dadweynaha.
Ka hubi bogga Tamarta Qoryaha Adeegyada Dadweynaha bogga xaalad iyo cusboonaysiin.
Su'aalaha ku saabsan Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah?
U dir emayl:
Cusbooneysiinta E-maylka Tamarta
Isdiiwaan geli wixii cusboonaysiin ah adoo ku soo diraya emaylka Xafiiska Tamarta ee Gobolka.